Raisawasaaraha Cusub ee Dalka kenya ayaa ka warbixiyay Jagadaasi loo magcaabay | maakhir.com
Raisawasaaraha Cusub ee Dalka kenya ayaa ka warbixiyay Jagadaasi loo magcaabay
Nairobi:- Raisalwasaaraha Cusub ee Dalka Kenya Railio Odinga ayaa sheegay inuu aad u soo dhawaynaya Hashiiskaasi la Gaadhay oo ah mid ay dhamaan soo dhaweeyeen Beesha Caalmka iyo waliba dadka ku dhaqan Dalka kenay, Mr Odniga oo Saxaafada warsiiyay ayaa sheegay inuu so Toosa haadan u bilaabayo inuu kulamo Joogta ah la yeesho dhamaan Bulshada Reer Kenya.
Raylla Odhinga waxaa uu balan ku qaaday in uu gacan dhaqaale siin doono dhamaan dadkii ku barakacay burburkii ka dhacay wadanka Kenya kaasoo ay dad badani ku waayeen hantidooda qaar kaloo badana ku dhinteen kuwa kalena ay ku waayeen shaqooyinkooda.
“Waxaan kaalmaynayaa Boqoolaal Kun ee Reer Kenya ah kuwaasi oo ka baracaya Rabshadii ka dhacay dhawaan Dalka Kenay,waxaan Tixgalinayaa dhamaan Eheladadii dadkoodu ku dhinteen Rabshahaasi ka dhashay is maandhaafka Siyaasadeed, Saasi waxa yiri Rilo Odinga.
Magaalada Kisuma oo ah Deegaanka uu ku dhashay Mr Ralio ayaa waxa maanta isu soo baxay Kumaanaan Ruux oo Dabaal Degayay kuwaasi oo til maamay inay aad ugu Farax sanyihiin Raisalwasaarahaasi Cusub,dadkaasi waxay ciyaarayeen Ciyaaro hidiyo dhaqan ah oo ay caado u leeyihiin.
Dhamaan Garabyadii isku hayay Siyaasada Dalka kenay ayaa Hashiis buux laka dhex dhegay iyada oo ay Mudooyinkan Dalka kenay Joogeen Masuuliyiin Afrikan ah oo aad looga yaqaan Aduunka.
« Buurta Daallo ee Gobolka Sanaag oo caawa dab Qabsaday
Madaxwayney Yuusuf ayaa maanta magcaabay Safiiro cusub »